Famerenana Spiritum - Famakiana psychic an-tserasera
Azonao atao ny miteny SpiritumVoalahatra mialoha ny anjarany. Ny orinasan-tsainy, Eso.tv, dia mamokatra fandaharana amin'ny fahitalavitra ara-tsaina izay alefa any amin'ny firenena 14 ary mazoto mijery an-jatony ny mpijery. Vokatr'izany dia azonao atao ny maminavina ny fenitra avo lenta amin'ny maha-azo itokiana, ny fahamarinana ary ny fahiratan-tsaina avy amin'ny vakiteninao.
Na izany aza dia misy zavatra maro be Spiritum manao tsara. Raha vaovao amin'ny tranokala ianao dia afaka mifampiresaka amin'ny psychic iray izay marihina fa "azo atao amin'ny Chat Free" mandritra ny 10 minitra maimaim-poana. Izany chat maimaimpoana izany dia natao hanomezana toky ary; tsy ilaina ny fampiasam-bola hanararaotana ny serivisy Spiritum.